Irreechaa: sirna Galateeffannaa fi Waaqeffannaa Oromoo – WAAQEFFANNAA
Kun akkuma jirutti ta’ee Oromoon haallan kana ittiin jiraachuu keessatti rakkoo tokko malee akka fedhee fi akka isa barbaachisetti raawwataa hin turre. Oromoon erga bara Mootummaa Abbaa Irree Minilikii kaasee hanga bara kufaatii Dargiitti mudannoowwan adda addaa, qonyonyaa mar’ummaanii itti ta’uun hin irraanfatamne hedduu keessa darbee as ga’e. Eenyummaafi Aadaa isaa jedhee, qe’ee irra jiraatu irratti dararamaafi itti wareegamaa ture. Haa ta’u malee, Oromoon Aadaa isaa, ibsituu maalummaa isaa kan taate kana qabatee hanga kufaatii Mootummaa abbaa irreetti deebisee guddifachuuf hiree dhorgamee ture. Qabsoon ummata Oromoo Jaarraa lakkoofsise amma illee galii isa agahuu baatus, wal’aansoon aadaa Oromoo guddisuu kun itti fufee jira. Calaqqisiistuu Oromummaa Aadaa ta’e keessaa tokko Irreechaa; sirna Galateeffannaa fi Waaqeffannaa Oromoo ti.
Waaqtiin birraa, Baatii Fulbaanaatii kaasee, dacheen daraaraa Keelloo, tuufoo, hadaafi kanneen biroon asiifi achiin bareedee ija nama hawwata. Gama biroon ammoo, Oyiruun Qonnaan bulaa baala irraa gara firiitti jijjiiramee asheetiin midhaanii alaafi mana guutee, mana nama hundaa biratti mullata. Ijoolleen asheeta quuftee bajjii ykn hurufa keessa burraaqxi. Jiboonnii fi gorommiin hoo’a birraa ganamaa gammadanii dirree keessa burraaqu, kormi loonii ni bookkiisu, Qotiyyoon hurufa keessatti wal jifatu, rimaan Arfaasaa guuttatte asiifi achii dhaltee jabbiin gorba keessaa mar’atti.Oromoon haallan kana hunda keessatti iccitii humna waaqaa qalbeeffataa deema. Waqtii afraasaatti rooba bokkaaf kadhatamee, bokkaa isaaf roobsee midhaan magarsee marga horiif geessise ni galateeffatama. Malkaatti ba’ee, dirree irra guutee” Midhaan namaaf geessee, marga horiif geessee, baala midhaan gootee gombisaafi togoogoo koo guutee,…..” jedhee waaqa kan itti galateeffatu birraadha. Ji’a Irreechaa, kan galateeffannaa.
Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta’e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Yeroo ammaa kana uummata miliyoona Afurii haga jahaa ol ta’utu achitti argamee bara baraan kabajtaa jira. Irreechaan Oromiyaan duubattis, bakka Oromooti qubatan golee addunyaa mara keessatti akkaan kabajamaa jira. Miidiyaaleen addunyaa beekamoo ta’an kan akka BBC, Aljeziiraa, CNN fi kkf irratti hirmaachuu eegalanii ajaa’iba jechaa jiru. Uummatni hagana baayyatu kun naamusaan marga qabatee malkaa Irreechaa sana ga’ee, bishaan cuuphee morma isaa tuqsiisee umurii naa kenni, addatti buufatee na milkomsi yaa waaqi galata kee jedhee hoggaa ga’ee deebi’uu rakkoo tokko malee ta’uun isaa Oromoon abbaa nageenyaa ta’ee beekamuu isaati. Oromoon haala kanaan waaqa isaa galateeffatee mana isaatti hoggaa deebi’u gosa nyaata adda addaa qopheeffatee, olla isaatiin baga ittiin si ga’e jedhee waliin nyaate dhuga.